Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Porofo: mamonjy ain'olona ny fanaovana sarontava
screen shot 2020 08 11 amin'ny 9 15 07 ao
Nilaza ny mpitsabo ao Ontario fa ny fanaovana sarontava na fanaronana tarehy dia iray amin'ireo zavatra mora indrindra sy mahomby indrindra azon'ny rehetra atao mba hampijanonana ny fiparitahan'ny COVID sy hamonjy ain'olona.
Ireo dokotera miasa eo amin'ny sisiny voalohany amin'ny areti-mifindra dia manahy momba ny fihetsiketsehana vao haingana nataon'ny olona milaza fa tsy ara-dalàna ny fanidiana ny areti-mandringana sy ny fameperana ary miteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny tsara.
Io ahiahy io dia nitombo niaraka tamin'ny vaovao fa mihoatra ny 1,800 ny ondrianina nozahana tsara tamin'ny COVID nandritra ny andro faharoa.
Ankoatry ny fanaparitahana vaovao diso, ny famoriam-bahoaka dia nihoatra ny toromarika avy amin'ny governemanta amin'ny haben'ny fivoriana any ivelany ary vitsy amin'ireo mpandray anjara no nisaron-tava. "Miaro anao ny saron-tava ary miaro ahy ny sarontava anao," hoy ny Dr. Samantha Hill, filohan'ny Fikambanana Medical Ontario. “Mazava ny porofo ara-tsiansa.
Ny fanaovana sarontava dia iray amin'ireo zavatra mora sy mahomby indrindra azon'ny tsirairay atao sy tokony hatao mba hampihenana ny mety hiparitaka sy hisamborana COVID-19. mahatratra ny viriosy tokoa. Ny sarontava dia mampihena ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo rano mitete avy amin'ny oronao sy ny vavanao.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mitaky sarontava amin'ny kilasy fitsaboana, izay tokony hatokana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo hafa voalohany. Mba hahomby indrindra amin'ny saron-tava, dia nanoro hevitra ny mpitsabo ao Ontario fa: saron-tava na sarona tarehy tsy tokony hatao amin'ny sosona telo farafahakeliny vita amin'ny lamba voatenona mafy, ampy handrakofana tanteraka ny orona sy ny vava, mifanaraka tsara ary tazomy ny endrik'izy ireo aorian'ny manasa. Tokony hosasana ny tananao alohan'ny hametrahana ny saron-tarehy ary aorian'ny hanesoranao azy.
Tadidio fa ny ivelan'ny sarontava na ny firakofana dia heverina ho maloto. Aza manitsy ny fisaronan'ny tavanao na hikasih azy amin'ny fomba rehetra rehefa manao azy ianao. Aza zaraina ny sarontava. Rehefa avy esorinao io dia sasao amin'ny rano mafana na atsipazo. Ny sarontava na sarona tarehy dia tsy tokony anaovan'iza na iza latsaky ny 2 taona na olona sahirana miaina na tsy mahatsiaro tena, tsy afa-miasa, na tsy afaka manala ny saron-tava tsy misy fanampiana.
Ankoatry ny fanaovana sarontava, ny dokotera ao Ontario dia mampatsiahy ny ontsanana rehetra hanohy hametra ny fivorian'ny trano ho an'ny olona ao an-trano, manasa tanana matetika ary mitazona lavitra metatra roa metatra amin'ny olona sendra anao eny ivelany. ”
Manana andraikitra sy andraikitra amin'ny famitana an'io areti-mandoza io ny ondrimanana rehetra, ary anisany io ”, hoy ny Tale jeneralin'ny OMA, Allan O'Dette. "Ny dokotera ao Ontario dia nanatevin-daharana ny fiangaviana nataon'i Premier Doug Ford hanaraka ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka mba hiverenan'ny fahasalamantsika sy ny toekarentsika haingana araka izay azo atao."
Blossom Nighttime Ageless Serum Serum - Ny fitarainana momba ny scam na ny akora ilaina tokoa?